सरसफाइ हिरो – Page2– WASHKhabar
राष्ट्रको सरसफाइ हिरो, जो सरसफाइ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्
उहाँको एउटै नारा छ ‘जय सरसफाइ’ । देशभर जहाँ - जहाँ सरसफाइ अभियान हुन्छन्, उहाँ त्यही पुग्नुहुन्छ । उहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरिहाल्नुहुन्छ । उहाँ पहिले नै सरसफाइ गर्ने जत्था तयार पार्नुहुन्न । तर उहाँ पुगेको ठाउँमा स्वयंसेवी भावनाले ओतप्रोत भएका मानिसहरु सरसफाइ गर्न जुर्मुराउछन् र अभि...
काठमाडौ : अभियान पनि थरी थरीका, नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौमा जन्मिएका राजमान महर्जन र सुशीला महर्जन फोहोर बढार्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । नेवारी परिकारलाई चिनाउन सक्रिय सुशीला महर्जन र जग्गा कारोबारी राजमानले २०६७ साल भदौ देखि बढार्ने अभियान चलाउनुभएको हो । सुन्दा असम्भव जस्तो लागेपनि उहाँहरुले यो अभियानमा ८ बर्ष व...
सरसफाइकर्मी थारुद्वारा ५ वर्षको कमाई अस्पताललाई दान
बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १४ मनहरापुरकी चैनकुमारी थारू गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालकी सफाईकर्मी हुन्। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालको सरसफाई गर्नु उनको दैनिकी हो। अस्पतालका अनुसार स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत उनलाई अस्पतालले उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा पुरस्कृतसमेत गरिसकेको छ। कामप्रति इमान्दार, लगनशील र अन...
काठमाडौमा एम्फील होल्डरका तीन शौचालय
काठमाडौ : शैक्षिक योग्यता, एम्फील । काम : बिहान प्राध्यापन, दिउँसो सहकारी र अपरान्ह शौचालयको रेखदेख । एमफील होल्डर ऋषि गर्तौलाको सामान्य दैनिकी यसरी नै चल्दै आएको छ । अरुले छिछीदुरदुर गर्ने शौचालयमा उहाँले हात हालेको दुई बर्ष वितिसक्यो । उहाँले अहिले काठमाडौको खुलामञ्च, शंखपार्क र रत्नपार्कको शौचालय सञ्चालन गर्द...
हेल्लो ! ग्रीनसिटी हस्पिटलका अध्यक्ष ज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ ? म लीलामणि पौडेल, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हजुर बोल्दैछु । भन्नुहोस् त मैले के सेवा गरौं ? तपाई, एम्बुलेन्स लिएर वाग्मती सरसफाइ अभियानमा सरिक भईदिनु पर्यो । यो अभियानमा तपाई जस्तो समाजसेवीहरुको खाँचो छ । हवस् हुन्छ हजुर, म आउँछु । ......................
यी हुन्, सरसफाइ क्षेत्रका जादुगर
उहाँको सामु परेपछि जस्तो सुकै अटेरी व्यक्ति पनि चर्पी बनाउने बाचा गरेर फर्किन्छन् । चर्पी बनाउन आग्रह गर्दा रीसले आगो भएकाहरु पनि उहाँको कुरा सुनेपछि मत्थर हुन्छन् र भन्न थाल्छन् ‘हजुर ! चर्पी त हाम्रै लागि हो ।’ SNV नेपालमा वास एडभाइजरको रुपमा सिरहामा कार्यरत रामप्रकाश सिंह सँग यस्ता दर्जनौं विधिहरु छन्, जसले चर्पी...
उहाँलाई गीत गाउन लेखिरहनु पर्दैन । संगीत पनि अनिवार्य छैन । न कण्ठ नै गर्नुपर्छ । आफै रचनाकार आफै गायककार, त्यो पनि तत्काल मनमै कोरिन्छन् गीतका शब्द । जस्तो परिवेश त्यस्तै किसिमको गीत क्षणभरमै तयार पारेर गाईहाल्ने उहाँको विशेषता हो । उहाँले झण्डै चालीस बर्ष विताईसक्नुभएको छ गीत गाएरै । उमेरले ६० टेक्नै लागेका, गीतको मा...
नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणमा जाँदा आफै सफा हुने शौचालयमा दिसा गर्नुभएको कुरा कहिलेकाहीं चुट्किला भन्ने शीलशीलामा सुन्नु भएकै होला ? यो कति हदसम्म सत्य हो वा हसाउने मसला बनाउन मात्र यसो भनिएको हो ? त्यो त भन्नेले नै जानुन् । त्यत्तिबेला सुनेको कुरा अहिले भने सत्य साबित भएको छ । त्यो पनि...
सरसफाइ अभियानका समन्वयकर्ता श्रेष्ठ
सिनियर डिभिज्नल इञ्जिनियर प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ । शाखा प्रमुखको हैसियतले वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी नीति, कार्यनीति बनाउने, वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गर्ने, खानेपानी योजनाहरु सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्म...
जसले चर्पी र खानेपानी बनाएरै पेन्सन पकाए
इञ्जिनियर भएपछि उहाँलाई सडक विभागमा काम गर्ने मन थियो । त्यहाँ नभए पनि सिंचाई विभागमा । तर उहाँले सेवा शुरु गर्नुभयो खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट । खानेपानी विभागमा त खानेपानीको धारा, ट्याङ्की र पाइप लाइनको डिजाइन गर्नु पर्दो हो भन्ने लागेको उहाँलाई पछि मात्र थाहा भयो, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत रहेर त चर्प...